? ????? ?????? ???? ???????? ??????? လ ရဲ့ မင်းသမီးလေးက Top 12 Leader Su Mon Mon Zaw (FB-000007) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ? စိတ်ကူးထဲက ပုံရိပ်နဲ့ ထပ်တူကြမယ်လို့လဲ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ? Art Director & Stylist PuTu Photographer Aung Zaw (Love Space) Hair & MakeUp April Thuta Designer Ko Latt Design Min Min Han
FOCUS Beauty 2021 Top 1 to 12 တို့ရဲ့ 2022 Calendar Shooting BTS Video ကိုကြည့်ပြီး Phone Bill တစ်သောင်း ကံထူးသူများကို ကြေညာပေးပါတော့မယ်။ Top (11) Leader Sandar Win Maung ရဲ့ Shooting Video ကို ခန့်မှန်းနိုင်သူများထဲမှ Phone Bill တစ်သောင်း ကံထူးသူ (၅) ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ကံထူးသူများကို ဖုန်းဆက်ပြီး ဖုန်းနံပါတ်တွေ confirm ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းလေး ဖွင့်ထားပေးပါဦးနော်
? ????? ?????? ???? ???????? ???? လ ရဲ့ မင်းသမီးလေးက Top 11 Leader Sandar Win Maung (FB-000695) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ? စိတ်ကူးထဲက ပုံရိပ်နဲ့ ထပ်တူကြမယ်လို့လဲ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ? Art Director & Stylist PuTu Photographer Jason Ya Hair & MakeUp Ma Htet (Pop Soul) Designer Ko Latt Design Min Min Han
? ????? ?????? ???? ???????? ???????? လ ရဲ့ မင်းသမီးလေးက Top 10 Leader Lae Shwe Yee (FB-000020) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ? စိတ်ကူးထဲက ပုံရိပ်နဲ့ ထပ်တူကြမယ်လို့လဲ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ? Art Director & Stylist PuTu Photographer Aung Kyaw Tun (Visual Design) Hair & MakeUp Hello Designer Wai Yan Design Min Min Han
FOCUS Beauty 2021 Top 1 to 12 တို့ရဲ့ 2022 Calendar Shooting BTS Video ကိုကြည့်ပြီး Phone Bill တစ်သောင်း ကံထူးသူများကို ကြေညာပေးပါတော့မယ်။ Top (10) Leader Lae Shwe Yee ရဲ့ Shooting Video ကို ခန့်မှန်းနိုင်သူများထဲမှ Phone Bill တစ်သောင်း ကံထူးသူ (၅) ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ကံထူးသူများကို ဖုန်းဆက်ပြီး ဖုန်းနံပါတ်တွေ confirm ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းလေး ဖွင့်ထားပေးပါဦးနော်
FOCUS Beauty 2021 Top 1 to 12 တို့ရဲ့ 2022 Calendar Shooting BTS Video ကိုကြည့်ပြီး Phone Bill တစ်သောင်း ကံထူးသူများကို ကြေညာပေးပါတော့မယ်။ Top (9) Leader Myat Phoo Zaw ရဲ့ Shooting Video ကို ခန့်မှန်းနိုင်သူများထဲမှ Phone Bill တစ်သောင်း ကံထူးသူ (၅) ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ကံထူးသူများကို ဖုန်းဆက်ပြီး ဖုန်းနံပါတ်တွေ confirm ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းလေး ဖွင့်ထားပေးပါဦးနော်
? ????? ?????? ???? ???????? ???????? လ ရဲ့ မင်းသမီးလေးက Top9Leader Myat Phoo Zaw (FB-000018) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ? စိတ်ကူးထဲက ပုံရိပ်နဲ့ ထပ်တူကြမယ်လို့လဲ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ? Art Director & Stylist PuTu Photographer Jason Ya Hair & MakeUp Hello Designer Wai Yan Design Min Min Han
FOCUS Beauty 2021 Top 1 to 12 တို့ရဲ့ 2022 Calendar Shooting BTS Video ကိုကြည့်ပြီး Phone Bill တစ်သောင်း ကံထူးသူများကို ကြေညာပေးပါတော့မယ်။ Top (? Leader Ei Ei Phyu ရဲ့ Shooting Video ကို ခန့်မှန်းနိုင်သူများထဲမှ Phone Bill တစ်သောင်း ကံထူးသူ (၃) ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ကံထူးသူများကို ဖုန်းဆက်ပြီး ဖုန်းနံပါတ်တွေ confirm ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းလေး ဖွင့်ထားပေးပါဦးနော်
? ????? ?????? ???? ???????? ?????? လ ရဲ့ မင်းသမီးလေးက Top 8 Leader Ei Ei Phyu (FB-000080) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ? စိတ်ကူးထဲက ပုံရိပ်နဲ့ ထပ်တူကြမယ်လို့လဲ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ? Art Director & Stylist PuTu Photographer Aung Kyaw Tun (Visual Design) Hair & MakeUp Jessica Han Designer Zaw Naung Design Min Min Han